Sidee loo dalbadaa nooca badeecada? - DataNumen
Sidee loo ogaadaa in badeecadaadu ay dayactiri karto / soo ceshan karto feylkayga musuqmaasuq?
Waan ku guuldareystay in aan faylkeyga ku hagaajiyo badeecadaada, waayo?
Waxaan ka helay cayayaanka alaabtaada. Maxaa la sameeyaa
Sidee loo hubiyaa haddii feylkayga aan dib u soo ceshan karo naftayda?
Faylkaygu wuu ka baxsan yahay soo kabashada. Maxay tahay meesha ugu dambeysa ee aan tago?
Waxaan rabaa muuqaal aan laga heli karin badeecadaada. Maxaa la sameeyaa
Sidee loo xaliyaa qaladka "Share xadgudubka"?
Baarka horumarka waxba iskama beddelo (ama si tartiib ah ayuu isu beddelaa) barnaamijkuna wuu fadhiistaa. Maxaa la sameeyaa
Ma u baahanahay inaan ka saaro nooca demo ka hor inta aanad rakibin nooca buuxa?
Sidee loo tirtiraa barnaamijkaaga?
Waa maxay farqiga u dhexeeya nooca demo iyo nooca buuxa?
Ma ka faa'iideysan karaa feylka go'an ee ka dhashay nooca demo, ka dib markii aan helo nooca buuxa?
Maxaan sameeyaa ka dib markaan helo nooca buuxa?
Miyaan u isticmaali karaa barnaamijkaaga si aan u dayactiro faylka Mac ee musuqmaasuqa ah?
Nooca buuxa ma soo kaban doonaa xog ka badan tii demo?
Mudo intee le'eg ayey ku qaadan doontaa barnaamijkaaga inuu ku hagaajiyo feylkayga?
Sidee loo cusbooneysiiyaa alaabteyda
Faylkaygu durba wuu kujiraazip ama.rar qaab. Sidee isugu cadaadin kartaa oo mar labaad ku qarin kartaa WinZip ama GuulRAR?
Barnaamijkaagu miyuu ku shaqeeyaa MacOS?
Miyaan ku soo saari karaa keydka xogta go'an qaabka Helitaanka 95/97?
DataNumen Outlook Repair/ Dib u soo kabashada
Waxaan ka helayaa qalad "Out of Memory" markaan dayactirayo PST /OST faylka Maxaa la sameeyaa
Maxaan ugu heli waayey emailada la doonayo ama walxaha kale feylka PST go'an?
Waxaa jira waxyaabo aan loo baahnayn oo ku jira faylka PST ee go'an. Sidee loo baabi'iyaa?
Waxaan qaabeeyaa darawalkayga. Weli miyaan soo kaban karaa xogtayda Muuqaalka?
Maxay meydadka qaar ka mid ah farriimaha la soo helay u madhan yihiin?
Waa maxay farqiga u dhexeeya DataNumen Outlook Repair iyo DataNumen Outlook Drive Recovery?
Waa maxay farqiga u dhexeeya DataNumen Outlook Repair iyo DataNumen Exchange Recovery?
Muxuu lambarka sirta ah ee lasoo helay uga duwan yahay midka aan dhigay?
Sida loo dayactiro kala qaybsanaanta zip faylka?
Sida loo dayactiro taako zip faylka?
Waa maxay macnaha xaaladda la soo celin karo ee ku jirta warbixinta demo?
Maxay tahay sababta in badan oo ka mid ah taariikhda taariikheed ee keydka keydka loo hagaajiyay 1900-01-01?
Sababta aan weli u furi karin waxyaabaha go'an DBF faylka?
Waxaan isku xirayaa sawirka C-ga. Sidee loo soo celiyaa?
Sida loo dhajiyo sawirka uu abuuray DataNumen Disk Image
Sidee loo dalbadaa nooca badeecada?
Maxaa dhacaya kadib markaan diro amarka?
Waxaan ahay cashuur dhaaf. Sidee looga hortagaa canshuurta iibka ee amarkayga?
Ma bixisaa sicir-dhimis waxbarasho?
Sidee loo soo celiyaa amarkayga?
Shatigu ma yahay mid waara?
Immisa kombiyuutar ayaan ku rakibi karaa alaabtaada?
Ma ka wareejin karaa liisanka hal kombuyuutar mid kale?
Sidee ruqsad looga joojiyaa?
Waxaan qabaa su'aal / dhibaato ku saabsan mid ka mid ah maqaalladaada blog. Maxaa la sameeyaa
Miyaad ku dari kartaa backlink-ka degelkeyga?
Badeecad kasta, waxaa jira nooc demo oo bilaash ah, oo lagala soo bixi karo bogga sheyga adoo gujinaya "Download Free" Badhanka.
Nooca demo ayaa caadi ahaan doona MA soo saar faylka go'an, ama ku soo rogo xaddidaadaha qaarkood faylka go'an. Si aad u hesho faylka ama aad u baabi'iso xaddidaadaha, waxaad u baahan tahay inaad gujiso "Iibso Hada" badhanka si aad u dalbato nooca buuxa.
Waan aqbaleynaa dhammaan kaararka deynta ee waaweyn, Maestro (UK), giropay (Jarmalka), iDEAL (Nederland), Wareejinta Bank / Wire, WebMoney, Amarada Iibsiga, PayPal, Jeegaga, Debit Tooska ah iyo Amarada Fakiska / Telefoonka.
Haddii shirkaddaada ama hay'addaadu ay daneynayaan inay shati u siiso badeecadeena dhowr isticmaale, waxaad heli kartaa qiimo dhimis mug leh oo lacag badan waad keydin kartaa adigoo wada iibsanaya rukhsado badan.
iibsadaan, nooca demo, buuxda, si, gadashada
La wadaag Qodobkaan:
Wali xayiran? Sideen u caawin karnaa?
La daabacay May 13, 2021